Jonga iprofayili yabucala kwi-Instagram, ngaba kunokwenzeka? MUSA UKUBA NAMAXESHA! | Izikhokelo ze-Android
UCristian Garcia | 11/05/2021 13:18 | Ukuhlaziywa ukuba 11/05/2021 13:22 | Instagram, Izifundo ze-Android
Namhlanje, Instagram Enye yezonxibelelwano ezisetyenziswa kakhulu kwihlabathi. Nangona ekuqaleni ibingeyompumelelo intle, kuba iTuenti yayisele ikho, uhlaziyo lwale app lwakhokelela ekusileleni nasekulibeleni. Uninzi luye lwacinga ukuba kuya kwenzeka okufanayo ngale foto intsha ithengwe nguFacebook, kodwa yonke imihla iba ngcono. Ngenxa yokufikelela ngokulula okukhoyo kuye wonke umntu, kukho amanyathelo athile anokuthathwa ngabasebenzisi ukuze kungangabo bonke abantu abanokubona ukutya kwabo.
Kwaye kungenxa yokuba uninzi lwabantwana abakwezi nethiwekhi, kunomdla ukwazi ukuba ungabathintela njani abantu abangafanelekanga ukuba bangafikelela kulo lonke ulwazi lwakho. Ukubeka iakhawunti yakho ngasese kulula kakhulu, ukubathintela ukuba bangayiboni ngaphandle kwayo yonke into yenye ibali. Funda ukuze ufumane ukuba bangayenza njani. Kodwa unako jonga iprofayili yabucala ye-Instagram?
1 Uyijonga njani i-Instagram yangasese ngokusemthethweni
2 Hlola iakhawunti yabucala ye-Instagram ngokwenza iprofayili yesibini
3 Sebenzisa i-Facebook ukujonga iprofayile yakho yabucala ye-Instagram
4 Sukujonga usetyenziso lokuhlola kunye nokujonga iprofayili yabucala ye-Instagram
5 Zikhusele kwi-Instagram ukuze bangahloli iprofayile yakho
6 Isaziso esisemthethweni esinxulumene nokujonga iprofayili yabucala ye-Instagram
Uyijonga njani i-Instagram yangasese ngokusemthethweni
Ukuba a Iprofayile ye-Instagram ngasese, oko akuthethi ukuba akunakufikeleleka. Kwaye ke, ungayibona ngeendlela ezininzi, zonke zisemthethweni, ezingazukuzisa naluphi na uhlobo lwengxaki. Xa umntu ene-Instagram yakhe yabucala, kungenxa yokuba abafuni ukuba abantu abangabaziyo babenako ukufikelela kuzo zonke iifoto zabo. Ukuthathela ingqalelo olo lwazi ngakumbi nangakumbi esinokuthi singene kulo, njengendawo esikuyo ngoku amabali okanye kwiifoto ze ifidiKucetyiswa ukuba uvumele kuphela abahlobo bakho ukuba babone le datha.
Ngubani ongandilandeliyo kwi-Instagram? Fumanisa eziapps
Los Amanyathelo okujonga iprofayili yabucala ye-Instagram imi ngolu hlobo lulandelayo:
Okokuqala, kuya kufuneka ujonge iprofayile kwi-Instagram, kuya kufuneka uyenze kuphela bhala igama lakho kwibhokisi yeefayile zokukhangela ukusuka kwi-Instagram. Emva koko, kuya kufuneka ngenisa isicelo sokulandelela ngokunqakraza kwiqhosha 'Landela', ngeprofayile engeyiyo okanye yokwenyani. Ngoku kufuneka silinde yamkela isicelo sakho, kwaye ungadlulela kuluhlu lwabalandeli. Nje ukuba wenze oku, uya kuba nakho ukubona yonke imixholo yabo efakiweyo kunye namabali abo ngexesha lokwenyani.
Apha ngezantsi sichaza amanyathelo nge Iikrini ezintathu zenkqubo eza kulandela:
Ewe kunjalo, yeyona ndlela icacileyo kuzo zonke, kodwa njengoko besesitshilo apha ngasentla, iprofayili yabucala yenzelwe ukugcina umbono weprofayile kubahlobo bomsebenzisi. Ke ngoko, ukuba ufuna ukuyibona, kuya kufuneka ucele ubuhlobo ngokunqakraza kwiqhosha elithi 'Landela'. Xa wamkelwe, uya kuba nokufikelela kwi-feed yabo, amabali kwaye iyavela.
Olunye ukhetho kukuthetha ngqo kumsebenzisi weprofayile yabucala ye-Instagram ebuzwayo. Unokwenza oku ngokuthumela umyalezo wabucala, kwaye umcele ukuba akwamkele phakathi kwabahlobo bakhe. Kusesandleni sakhe ukufikelela kwiakhawunti yakhe. Lo myalezo awuyi kuvela kwibhokisi yomyalezo wakho, ukuba awukho kwizicelo. Uyakwazi ukufunda oko umbhalele kona, kodwa ade amkele isicelo sakho somyalezo awuyi kukwazi ukuba uyifundile okanye akayifundanga. Nje ukuba wamkele, ungaba nencoko.
Ke Sikufanekisela ezinye izikrini zenkqubo:
Hlola iakhawunti yabucala ye-Instagram ngokwenza iprofayili yesibini
Kwakhona, khumbula loo nto Izikhokelo ze-Android azinaxanduva lokusetyenziswa gwenxa kwezi ndlela. Kwimeko apho bangawamkeli umyalezo wakho okanye isicelo sokulandelela, kukho iindlela zokukwazi ukungena. La ngamanyathelo anqabileyo okungaphezulu kokuwafunda, kufuneka uyazi ukuba ungawaqonda njani ukuze angakucinezeli.
Yenza iakhawunti engeyonyani Kulula kakhulu, ukubeka iifoto zomnye umntu akukho semthethweni, kodwa namhlanje zininzi iiakhawunti ze-meme, ezilungileyo kakhulu kwaye uninzi lukulungele ukulandela. Khangela nje abalandeli abaqhelekileyo okanye ulandele iiakhawunti ezininzi, kwaye ukungenisa isicelo sakho kuya kukwenza ubonakale njengeyona nkangeleko imsulwa. Lumka xa ufumana isicelo sale ndlela, kuba ihlala ingabantu abangajongi kwinto entsha xa ungena kwimfihlo yakho.
Enye indlela esetyenziswa ngokubanzi, ngakumbi phakathi kwamaqabane angaphambili kunye nabahlobo bangaphambili, yile Cela umntu ofanayo ukuba akuvumele ukuba usebenzise iakhawunti yakhe okanye akunike izikrini ukuze ubone ukuba ikweyiphi iprofayili yabucala. Qiniseka ukuba abalandeli bakho ngabantu abathembekileyo, ukuze ungafumani ukuphoxeka kukufumanisa ukuba uhlolwa ngumntu obumthatha njengomhlobo wakho.
Sebenzisa i-Facebook ukujonga iprofayile yakho yabucala ye-Instagram
Kunzima ukukholelwa, kodwa kunokwenzeka jonga iifoto kunye neevidiyo ezivela kwiprofayili yabucala ye-Instagram ngeakhawunti yakho ye-Facebook. Ukuba umsebenzisi ekuthethwa ngaye wabelana ngeefoto zakhe ezipapashwe kwifidi ukuze into efanayo ipapashwe ngokuzenzekelayo kuFacebook, kwaye oku akunakhuseleko, uya kuba nakho ukubona lonke ushicilelo alwenzileyo okoko wavula ukhetho kwi-Instagram yakhe. Ngaphezu koko, uya kufumana ifolda ethile kunye nezo foto.
Ewe kunjalo, oku kunokwenzeka kancinci, kuba into yesiqhelo kukuba umntu oneprofayile yabucala, unabo bonke ngokulinganayo. Kodwa kukho abo bangaphathi kakhulu kuFacebook, kuba bayisebenzisa kuphela ekwabelaneni ngeevidiyo, iifoto kunye neememo zabahlobo, kwaye abanayo ngasese, ithuba elinokuthi lisetyenziswe.
Ke, ukuba ufumanisa nje ukuba i-Facebook yakho ayiyimfihlo, yiya kuseto lweakhawunti yakho ukuze ubhengeze ulwazi oluninzi ngangokunokwenzeka kwiprofayile yakho. Ke oyena mntu ungamaziyo angabona ligama lakho kunye nomfanekiso weprofayile yakudala.
Sukujonga usetyenziso lokuhlola kunye nokujonga iprofayili yabucala ye-Instagram
Iyaqondakala into yokuba ufuna ukubona iifoto zeprofayili yabucala ye-Instagram, kwaye uqhutywa lithemba, uwela kumgibe wenani elikhulu leapps ezithembisa ngommangaliso onjalo. Njengoko besitsho, ukufuna ukwazi kwabulala ikati, kwaye kunokwenzeka ukuba nguwe ochaphazelekayo, hayi iprofayile ofuna ukuyibona.
Kwaye zininzi zezi zicelo ekucingelwa ukuba ziya kukuvumela ubone nayiphi na iprofayili yabucala ye-Instagram, eneneni kuphela idatha yakho iya kubiwa, Ukongeza ekuzameni ukophula ukhuseleko lwakho ukuhlasela isixhobo sakho ngeentsholongwane okanye ubuqhetseba. Eyaziwa kakhulu nge-Instaprivateviewer, Spyzie, InstaSpy okanye Insteye, bonke bakucela ukuba ufake idatha yakho ye-imeyile, ipassword, umsebenzisi we-Instagram nabanye. Ke, ungazami ukungena kwiakhawunti yabucala ngaphandle kwemvume, kuba uya kufumana iingxaki kuphela.
Ezinye zeapps ezithi akufuneki usebenzise ngenxa yezizathu zokhuseleko Zizo zilandelayo:
Bonke bathembisa ukukwazi ukubona iiprofayili zabucala ze-Instagram, kodwa Ungaze unike idatha yakho yokufikelela, unike imvume kubantu besithathu, kungasathengwa kangako ukuvula umxholo.
Ukuba ugqiba ekubeni uthathe umngcipheko kwaye usebenzise naziphi na ii -apps esizikhankanyileyo kuluhlu, iya kuba semngciphekweni wakho kunye nenkcitho. Asikukhuthazi oko, ekubeni sibonile ubungozi bokubhalisela bona, nangona zikhona ezinye iiwebhusayithi ezibacebisayo nokuba bazi ukuba ziyingozi. Ke lumka ngale nto.
Zikhusele kwi-Instagram ukuze bangahloli iprofayile yakho
Njengoko sele ubonile, zininzi iindlela apho umntu wasemzini anokuzama ukungena kwiakhawunti yakho yabucala ye-Instagram. Ukuthintela oku, kubalulekile ukuba ulandele izikhokelo ezithile ukunqanda iingxaki ezinkulu kwikamva elikude kakhulu.
Ukuqala, ungaze wamkele izicelo zokulandelela ezivela kubantu abangaziwayo. Okokuqala komsebenzisi kwi-Intanethi, ungaze upapashe iifoto ezibekiweyo, yonke into oyilayisha kwinethiwekhi inokuhamba yintsholongwane ubusuku bonke ngaphandle kolawulo. Lumka xa ubeka iindawo, kuba oku kunokuba yindlela yokulandelela abantu abangathandekiyo, kungcono ungaze uyibeke. Ngayo yonke le nto kufuneka unele ukuba ungaze ube neengxaki kwiakhawunti yakho ye-Instagram.
Isaziso esisemthethweni esinxulumene nokujonga iprofayili yabucala ye-Instagram
Kwi-Androidguías asixhasi izinto ezingekho mthethweni okanye ezingekho mthethweni, ezinokuthi zibeke esichengeni ukhuseleko lwabanye abasebenzisi. Kungenxa yoko le nto kufuneka uyazi loo nto Yonke into oyifundileyo apha ngezantsi yenzelwe iinjongo zemfundo kunye nolwazi. Esandleni ngasinye yindlela abasebenzisa ngayo ulwazi oluthile. Esi sithuba sigxile ekufundeni indlela yokuzikhusela kuhlaselo lwexesha elizayo, kunye nendlela yokuzikhusela ngokuchasene nabo xa kunokwenzeka.
Ungayifumana njani kwakhona imiyalezo ecinyiweyo evela kwi-Instagram
I-Androidguías ayinaxanduva lokusetyenziswa gwenxa kolwazi oluchazwe apha. Ukusetyenziswa kakuhle okanye kakubi kwazo zonke ezi ndlela kuya kuba luxanduva lomsebenzisi owenze njalo. Njengengcebiso, sebenzisa le datha ukuze ufunde kwaye uzikhusele, hayi ngezenzo ezingekho mthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Izifundo ze-Android » Jonga iprofayili yabucala kwi-Instagram, ngaba kunokwenzeka?
Ungayifumana njani kwakhona i-Clash of Clans account yakho (zonke iindlela ezinokubakho)